အစားအသောက်ပုံတွေကို ဘယ်လိုမျိုး စားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးကြသလဲ ? | yathar Magazine
Social Media တွေပေါ်မှာ သားရည်ကျလောက်အောင် စားချင်စဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ အစားအသောက် Photo တွေ ဖန်တီးရာမှာ လွယ်ကူပြီး ထိရောက်တဲ့ Tips လေး (၅) ခုကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ မိမိ ရဲ့ SNS မှာ တင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ် ၊ Restaurants Review နဲ့ Menu တွေ ဖန်တီးချင်တာဖြစ်ဖြစ် ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းတွေကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် ….
(၁) အစားအသောက်ရဲ့ ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ရှု့ထောင့်ကို ရွေးပါ ။
ဥပမာ Cake အဝိုင်း တစ်လုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ကိတ်ရဲ့ အပေါ်စီးက နေ ရိုက်ချင်းဟာ တအားရိုးရှင်းပါတယ် ။ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုရိုက်မလဲကြည့်ရအောင် – ကိတ် ရဲ့ မျက်နှာစာရော ၊ ဘေးသားပါ ပါဝင်အောင် ကင်မရာကို 45ံAngle က နေရိုက်ကူးတာ အသင့်တော်ဆုံးပါ ။ လေးထောင့် ဆန်တဲ့ ကိတ်အမျိုးအစားဖြစ်ရင်တော့ ကိတ် ကို အတည့်အနေအထားဆိုတာထက် ကိတ်မုန့် ရဲ့ အစွန်းထောင့် တစ်ခုကို Focus ယူတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ ။
(၂) နေရာချ ခြင်း
Food Photography သဘောအရ အစားအသောက် တစ်ခု အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ (သို့) တွဲဖက်စားရမယ့် အစားအစာတွေ ကို ပုံကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တင် သိသွားတဲ့ info of image သဘောပါ ။ဥပမာ ကော်ဖီ တစ်ခွက်ကို ဦးတည်ထားတဲ့ Photo တစ်ခုမှာ ဆိုရင် Classic ဖြစ်တဲ့ ခွက်ရယ် ၊ မွှေဖို့ ဇွန်းတစ်ချောင်းရယ် ၊ တွဲဖက်စားလို့ရတဲ့ မုန့် တစ်ချို့ ရဲ့ အလယ် မှာ ကော်ဖီကို ဖြည့်ထားမှာပါ ။Photo ရဲ့ Frame တစ်ခုလုံးမှာ အစားအစာတွေ အများကြီးပါဝင်နိုင်ပေမယ့် Main Focus က ကော်ဖီဖြည့်ထားတဲ့ ခွက်ပါပဲ ၊ ကျန်တာက Frame တစ်ခုလုံးကို ဟာကွက်မရှိအောင် ဆင်ထားတာပါ ။
(၃) သဘာ၀ အလင်းရောင်ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချပါ
Food Photo တစ်ပုံရဲ့ အသက်က အလင်းရောင်ပါ ။ ပန်းကန်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ Cake တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အပေါ်မှာ ကြနေတဲ့ အလင်းရောင်သည် Soft Light ဖြစ်ရပါမယ် ။ အနောက်က Blur ထားတဲ့ နောက်ခံအတွက် Focus ကို Cake နဲ့ ပန်းကန်မှာပဲ ထားပါ ။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်က Shadows ကို ပန်ကန်းရဲ့ အောက်မှာ အတိအကျ ယူထားခြင်းက Photo တစ်ခုရဲ့ အသက်ဝင်လာခြင်းပါ ။ အစားအသောက် ပုံတွေ ကို ကြည့်ရှု့အများဆုံးက အလင်းဆုံးနေရာကို အရင်ကြည့်ကြပါတယ် ။ Shadow ထားခြင်းက ခုဏက Cake ပေါ်မှာထားတဲ့ Soft Light ကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့လိုက်တာပါ ။
(၄) Line & Layer တွေကို ကောင်းကောင်း အသုံးချပါ
Line & Layer ဆိုတာ ဘာလဲ အရင်ရှင်းပြပါမယ် ။ Steak တစ်ခုရဲ့ အသားဘေးဘောင်တွေ ၊ Dining Set မှာ ဆင်ထားတဲ့ ဇွန်း၊ခရင်း နဲ့ ဓားတွေကို အညီစီထားတာတွေကို ပေါ်လွှင်အောင်ရိုက်ထားတာက Line ပါ ။ Burger ရဲ့ ဘေးတိုက် အနေအထားမှာ Burger ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ အသား၊အရွက်နဲ့ ချိစ့် တွေကို အလွှာလိုက် ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ထားတာက Layer ပါ ။Line & Layer တွေက Food Photo တွေမှာပါဝင်တဲ့ အစီအစဉ်တကျဖြစ်တာ ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ဦးစားပေး ဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ် ။
(၅) အရောင် ကစားခြင်း
အရိုးအရှင်းဆုံး ပြောရမယ်ဆို Setting ချပြီး ရိုက်ထားတဲ့ Food Photo တွေမှာ Main Focus Food ရဲ့ အရောင်ကို သဘာဝဆန်အောင် ၊ ထင်းနေအောင် ၊ စိုစိုပြေပြေလေး ဖြစ်နေအောင် အရောင်ချထားပြီးတော့ ဘေးက Setting Food တွေကို အရောင် မှိန်ထားတာ ၊ အနည်းငယ် Blur ထားတာ ၊ နောက်ဆုံး B&W ချထားမျိုးပါ ။ ဒါလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ။
အခုဆိုရင်တော့ အစားအသောက်တွေကို Photo ရိုက်ကူးရာမှာ သူများထက်ထူးပြီး စားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Tips (5) ခုပါ ။
သူများတင်တဲ့ Food Photo တွေကြည့်ပြီး အားကျနေစရာမလိုတော့ဘူးနော် ၊ အဲလူတွေ ကို Phone Screen ယက်အောင် လုပ်လို့ ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိနေပြီပဲ ။
yathar ရဲ့ Website မှာ ဒီလို Menu လှလှလေးတွေ ရိုက်ထားတဲ့ ဆိုင်လေးတွေရှိတယ်နော် ။ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးချင်ရင် ပဲဖြစ်စေ ၊ ကိုယ်ဆိုင်က အစားအသောက် လှလှလေးတွေ ကြော်ငြာဖို့ အတွက်ပဲ ဖြစ်စေ yathar ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။